NgoJuni 2020-Funda ukuRhweba
I-Kyber Network ibhengeza ukuPhucula iProtocol yoPhuculo loMhla
Ukuhlaziywa: 30 Juni 2020
Umgaqo-nkqubo we-liquidity protocol, i-Kyber Network, isethwe ngoJulayi 7, 2020, njengomhla wokuphuculwa kwayo kwiprotocol yeKatalyst.
NgoMvulo, nge-29 kaJuni, uKyber wabhengeza ukuba ekugqibeleni umisela umhla wohlaziyo olukhulu kwimveliso yentshatsheli yeKatalyst. Uhlaziyo luya kwenzeka ngoLwesibini, nge-7 kaJulayi ngo-2020, kanye nge-7 kusasa nge-GMT. Ikwaveze ukuba izokwazisa into entsha ebizwa ngokuba yiKyberDAO. I-KyberDAO "liqonga elihlangeneyo lokuxhasa ulawulo olulawulwa ngumgaqo-nkqubo," utshilo umpapasho weendaba.
UKyber ugxile kutshintshiselwano lweethokheni. Idibanisa ukuthengiswa kwezinto ezigcinwe kwiindawo ezahlukeneyo kwaye ivumela abanini beKNK ukuba batshintshe amathokheni phakathi kweendawo zotshintshiselwano ezithandwayo kunye nezipaji. Ngolu hlaziyo, uKyber ulindele ukufumana ngaphezulu kwe-72,000 yabanini beKNC abatsha. Bonke abanini beKNC banokuba negalelo ekukhuleni kwenethiwekhi ngokubeka amathokheni abo.
Abanini be-KNC banokusebenza njengabalawuli beprothokholi, ukongeza ixabiso kunye nokuvotela utshintsho kwiiparameter, kunye nohlaziyo olucetywayo. Abathathi-nxaxheba baya kufumana umvuzo we-Ethereum (ETH).
Ukongeza kubaphathi beKNC, umyalezo uthi uhlaziyo luya kuchaphazela abanye abathathi-nxaxheba baseKyber, abanjengoDApps / abaRhwebi, oovimba bokugcina imali kunye nabaqhubi beephuli zeKyberDAO.
UKyber ubeke esidlangalaleni ishedyuli yamanqanaba ahlukeneyo ophuculo. Inkampani ithi inokumisa urhwebo ngelixa uhlaziyo luqhubeka.
Ishedyuli yeenyanga ezizayo
Ukujonga phambili, uLuu ukwathe kwiindaba ukuba uKyber uza kugxila ekuboneleleni ngolwazi oluthe kratya malunga nezibonelelo eziza nokuphuculwa kweKatalyst.
“Siceba ukwandisa inani labachaphazelekayo abafumanekayo kubanini beKNC. Oku kubandakanya ukudibanisa izipaji zekhompyuter ezingaphezulu kwizikhangeli zabo ze-DApp ezivumela ukufikelela ngokulula kwiKyber.org, kunye nokufaka amachibi eStaking Pools angaphezulu anokunceda ukuvota egameni labanini beKNC kwaye babenakho ukufumana umvuzo.
tags Cryptocurrency, Umtsalane, Inethiwekhi yeKyber, I-KyberDAO
I-USDCHF yoRhwebo eKhona ngaphantsi kwe-0.9500 emva kokuPhumela kwiBias yokuGuqula eNkulu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-30 kaJuni
Nangona i-USDCHF ifumene ngaphezulu kweepips ze-30 kwiseshoni yangaphambili kumandla ebanzi esekwe kwi-USD kunye nemo yokuthengisa yentengiso. Ilahlekelwe ngamandla ayo, nangona kunjalo, kwaye yabuyela kurhwebo phantsi kwenqanaba le-0.9500, apho yayisezantsi nge-0.35% ngosuku. Njengoko ingqalelo ijika kwingxelo kaPowell, i-US Dollar Index inyuke nge-0.12 yepesenti, ibambe ukuthengisa okungathandekiyo.
Amanqanaba okumelana: 1.0027, 0.9766, 0.9550
Amanqanaba enkxaso: 0.9440, 0.9370, 0.9181
Ngaphakathi kwimeko ebanzi, ukwehla kwenqanaba le-1.0231 kubonwa njengenyathelo lesithathu lenkqubela ukusuka kwinqanaba le-1.0342. Xa sele ifikelele kwinqanaba eliphambili le-0.9242 (elisezantsi), bekufanele ukuba igqityiwe kwinqanaba le-0.9181.
Ukophulwa kwenqanaba le-0.9902 kunokwandisa ukubuyiswa ukusuka kwinqanaba le-0.9181 ukuya kwinqanaba lokumelana ne-1.0027. Emva kwayo yonke loo nto, urhwebo lwexesha eliphakathi ukuya kwelide kumanqanaba athambekele ekugcineni ixesha elide phakathi kwamanqanaba e-0.9181 / 1.0231.
Okwangoku, i-intraday bias kwi-USDCHF ayisathathi cala. Ngaphantsi kwe-0.9440 yenqanaba lenkxaso encinci kwicala eliphantsi kunokuzisa i-0.9370 yenqanaba eliphantsi lokuzama kwakhona. Ikhefu linokuqalisa kwakhona konke ukwehla ukusuka kwi-0.9902 kwaye ijolise kwiipesenti ezili-100 zokuqikelela ukusuka kwi-0.9902 ukuya kwi-0.9500 kumanqanaba e-0.9242.
Kulungile, ulwaphulo olwenziweyo lwenqanaba le-0.9550 endaweni yalo luya kuqala kwakhona ukubuyisela kwinqanaba le-0.9370. Kule meko, inokujonga kwenye i-rally (ngoku kwinqanaba le-0.9600).
I-S & P 500 yokubuyisela umda ngaphantsi kweNqanaba lama-3078.3 lokuGcina iBias esezantsi
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Juni 30
I-S & P 500 inokuhlala iphantsi kwenqanaba le-3078.3 ukubamba umngcipheko wokuqala kumngcipheko wokutsiba phantsi komndilili wokuhamba we-13 ngexesha lokulungiswa okubanzi. I-S & P 500's yakutshanje ephezulu kumanqanaba angama-3233 ajikeleze ummandla ungqinelana nomzuzu xa izehlo ze-COVID-19 zaphinda zaphinda zadubula.
Amanqanaba okumelana: 3250, 3139, 3078
Amanqanaba enkxaso: 3050, 3000, 2953.4
Ukuthambeka kwemihla ngemihla kubambe ngaphantsi kwenqanaba ku-3078.3 ukuya kwinqanaba elinokubakho ngenkxaso ebonwe kwinqanaba lokuqala lama-3050, emva koko ukunyuka komgangatho kwinqanaba lama-3039. Umva osondeleyo ongezantsi apha unokongeza ivolumu eyongezelelweyo kumbono wokulungisa kunye nenkxaso elandelayo ebonwe kumanqanaba angama-3000. ngaphaya kwenqanaba le-2953.
Kufanelekile ukuba ubone amanye amaxabiso agqityiwe ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso kwi-2953 ukwandisa amathuba okuba buthathaka ngakumbi ngenkxaso kwinqanaba lama-2900. Indlela egqibeleleyo yeyokuvavanywa kwenqanaba lama-2800 lokugqibela lokurhoxiswa kwepesenti ye-38.2 yeerali yonke ukusukela ngo-Epreli. .
Kwisakhelo seyure ezi-4, isalathiso sobuchwephesha siqinisekisa ukuba inkxaso ethile ilindele i-S & P 500 kwinqanaba elimalunga nama-3050, kukudibana komndilili we-5 kunye ne-13. Inkxaso eyomeleleyo ilindele kwinqanaba le-3000, eyindawo yokuhlangana yomgca othe tyaba kunye nomkhondo wokunyuka.
Nangona kunjalo, ngaphakathi kwee-oscillator zexeshana elifutshane, indawo ephikisanayo ipeyintiweyo ebonisa ithemba lenkqubela phambili, ngelixa i-RSI ibhabha idlule amanqanaba angama-50 emva kokuqhekeka. Kwicala elingaphezulu, uxhathiso lokuqala lunokuvela kumndilili wokuhamba o-5 kwaye, ukuba imiqobo enjalo ingoyiswa, indawo enamazinga aphezulu angama-3139 anokuvela.
I-Italiya 40 (ITA40) iqala kwakhona kwi-Uptrend, kwiMfazwe yokuXhathisa kwinqanaba le-19600
Iindawo eziKhuselekileyo: 24000, 25000, 26000
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 22000, 21000, 20000
I-Italiya 40 (ITA40) yexesha elide iTrend: Bullish
Isalathiso siyenyuka kwaye siyenyuka. Umzimba wekhandlela wokulungisa uvavanye inqanaba lokubuyisela iFibonacci 0.50. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka kwaye sifikelele kwinqanaba lokwandiswa kwe-2.0. Umkhwa unokuqhubeka emva kwexabiso ekujoliswe kulo.
ITA40-Itshathi yemihla ngemihla
Imiqondiso yetshathi yemihla ngemihla:
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend. Imakethi inyuke yaya kwinqanaba lama-53 le-Index yaMandla aNxulumene. Ibonisa ukuba isalathiso sikummandla ophakamileyo. Ikwangaphezulu komgca osembindini wama-50.
I-Italiya 40 (ITA40) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso kukuhamba ecaleni. Imakethi isehla emva kwenqanaba lokuphinda ubuye ngo-19600. Okwangoku amaxabiso ehla enyuka phakathi kwamanqanaba 19000 nango-19600. Ukwehla kwezantsi kufikelele kumgangatho ophantsi wowe-19295 kwaye usondela kwezantsi kowe-19000.
ITA40 - 4 Itshathi yeYure
Isalathiso singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ngaphambili ibikummandla othengiweyo wentengiso kodwa ngoku ixabiso liyehla. I-Italiya i-40 ikwi-bearish umfutho. Ii-SMAs zikwathambeka phezulu zibonisa intshukumo ephezulu. Ukubuyiselwa kwakhona kuwele kwinkxaso ye-21-yeentsuku ze-SMA.
Umbono ngokubanzi we-Italiya 40 (ITA40)
I-Italiyane 40 ngoku iphinda iqale ngokutsha kodwa ukulwa kwamadabi kwinqanaba le-19600. Okwangoku, amaxabiso ayatshintsha phakathi kwenqanaba le-19000 kunye nele-19600.
tags Ite40, Italy 40, Uhlalutyo Technical
I-NZD / i-USD ikwiNdlela esecaleni, amanqanaba okujolisa kwi-0.64500 kunye ne-0.65000
Amanqanaba okuGxila aphambili: 0.64000, 0.65000, 0.66000
Amanqanaba enkxaso aphambili: 0.58000, 0.57000, 0.56000
I-NZD / i-USD yexesha elide iTrend: Bullish
I-Kiwi ikwi-uptrend. Nangona kunjalo, ngoJuni intengiso ikwindlela esecaleni. Umzimba wekhandlela wokulungisa uvavanye inqanaba lokubuyisa le-0.786. Oku kubonisa ukuba intengiso iya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-1.272. I-Kiwi iya kuphakama kwaye ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa. Xa imarike ibuyela umva, ixabiso liya kubuyela kwinqanaba lokubuyiselwa kwe-0.786. Nangona kunjalo, ukubuyela umva kungangabikho kwangoko.
I-NZD / i-USD-Itshathi yemihla ngemihla
Ii-SMAs zihamba ngokuhamba ecaleni. Imakethi okwangoku ikwindlela esecaleni. I-Kiwi inyuke yaya kwinqanaba lama-54 le-Index yaMandla aNxulumene. Oku kubonisa ukuba esi sibini sikwi-uptrend kwaye nangaphezulu komgangatho osembindini we-50. Isibini sinokuphakama.
I-NZD / i-USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukutshintsha
I-Kiwi ikwindlela esecaleni. Ukusukela nge-11 kaJuni, isibini besirhweba phakathi kwenqanaba le-0.64000 kunye nenqanaba le-0.65000. Ixabiso ngoku liyenyuka kwixabiso lamaxabiso asezantsi. Ukuhamba kwecala kunokuchasana kokuqala kwinqanaba le-0.64500. Esi sibini sinokujika xa sichaswa.
I-NZD / i-USD-4 Itshathi yeYure
Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihamba ngokuthe chu. Ibonisa ukuba isibini sihamba ecaleni. Isibini singaphezulu kwama-25% kuluhlu lwemihla ngemihla. Iimarike zikwisantya esiphezulu. Imarike kulindeleke ukuba inyuke.
Imbonakalo ngokubanzi ye-NZD / USD
I-Kiwi isahamba ecaleni. Ixabiso ngoku liyenyuka kwinqanaba le-0.64013 ukufikelela kwinqanaba eliphezulu le-0.64500. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka ukuba ukuxhathisa kokuqala kuphukile.
tags NZD / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
Igolide iyaqhubeka kuLuhlu oluBoshwe kuLuhlu olungezantsi kwe- $ 1,770
Igolide (i-XAU / i-USD) iyaqhubeka nokuhamba kwayo kuluhlu olwahlukileyo-kwiseshoni yaseYurophu kwaye ihlala ngaphakathi kwinqanaba le-1,775-70 yenqanaba.
Amaxhala malunga nenani elikhulayo lamatyala amatsha eCoronavirus kunye nokuphela kwethemba lokubuyisela imeko yezoqoqosho ebunjiweyo e-V iyaqhubeka nokwandisa inkxaso yesibheno esikhuselekileyo sesinyithi.
IGolide ifumene inkxaso engaphaya kwinkxalabo yezopolitiko phakathi kwe-US ne China, ngakumbi emva kokuphunyezwa kwemithetho yezokhuseleko yase-Hong Kong neMacau. Ngeli xesha, i-US iziphindezele ngokunciphisa umda wokuthumela ngaphandle kwitekhnoloji yaseMelika eHong Kong kwaye iyayeka ngokupheleleyo imigaqo yonyango e-China.
Ngaphandle kweemeko ezintle kunye nezinto, i-rally eya phezulu yathinjwa kukuphola okuthobekileyo kwidola yase-US, ethi kwiimeko ezininzi ijongele phantsi imfuno yempahla elawulwa yidola.
Ukuqhubela phambili, abathathi-nxaxheba beemarike baya kujonga phambili kwidokethi yezoqoqosho yase-US, ebonisa ukukhutshwa kwe-PMI yaseChicago kunye neKhowudi yeNkomfa yabathengi yeBhodi yeNkomfa. Emva koko, uSihlalo weFed, uJerome Powell, uzakube enika ubungqina phambi kweKomiti yeeNkonzo zezeMali yeNdlu ekulindeleke ukuba ibe nefuthe elibonakalayo kwigolide kungekudala.
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela - nge-30 kaJuni
Amanqanaba okubonelela: $ 1,779, $ 1,790, kunye ne-$ 1,800
Amanqanaba okufuna: $ 1,765, $ 1,758, kunye ne-$ 1,745
Njengoko kucetyisiwe izolo, kufanelekile ukuba silindele ukubona ikhefu ngaphezulu komgaqo wokutsala utsaliwe kwisalathi seMACD. Ikhefu elingaphezulu kwalo mgca liya kuthi liphelise ukudityaniswa okuboshwe kuluhlu kwaye livule umnyango wegolide wokufikelela kwi-1,800 yeedola. Nangona ukufudukela kwicala elingezantsi kubonakala kungenakulindeleka, ukwehla ngezantsi kwenkxaso ye- $ 1,745 inokutshintsha kwangoko imeko ekhulayo.
I-USD / JPY iqala kwakhona kwi-Uptrend, kwiMfazwe yokuXhathisa kwiNqanaba 107.500
Amanqanaba okuGxila aphambili: 111.000, 112.000, 113.000
Amanqanaba enkxaso aphambili: 104.000, 103.000, 102.000
I-USD / JPY yeXabiso leXesha elide: Ukutshintsha
I-Yen yawela kwinqanaba le-106 ukuze iphinde iqhubeke nokunyuka. Isibini sikhuphukile kwaye sisondela kwinqanaba le-107.672. I-Yen yaseJapan ngoku isondela kwindawo yokumelana kwinqanaba le-107.700. Iimarike ziguquka ngaphantsi kokuchasana. Kwicala elingaphezulu, ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa liya kuqhubela phambili ixabiso ukufikelela kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 ziyehla ezantsi. Imakethi ngoku ikwi-downtrend. Esi sibini siwele kwinqanaba lama-53 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-Yen ikummandla ophakamileyo kwaye kunokwenzeka ukuba inyuke.
I-USD / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Bullish
I-USD / i-JPY ibini okwangoku i-uptrend. Umzimba wekhandlela obomvu uvavanye inqanaba lokubuyisela i-0.50. Ibonisa ukuba i-Yen iya kunyuka iye kwinqanaba eliphezulu le-2.0 yolwandiso. I-Yen okwangoku ijongene nenkcaso kwinqanaba lokunyuselwa kwinqanaba le-1.272.
Ii-SMAs zikwenyuka ziye phezulu. Ibonisa ukuba imarike ikwi-uptrend. I-Yen ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike isondela kwingingqi ethengiweyo. Isenzo sexabiso sibonisa umqondiso we-bullish.
I-USD / JPY ngoku inyukela phezulu emva kokuwa kwinqanaba eliphantsi le-106. Imakethi ngoku ijongene nokuchasana kwinqanaba le-107.700 njengoko uptrend usongelwa. Ixabiso liyatshintsha apha ngezantsi koxinzelelo lwangoku.
I-Binance yokuSungula ikhontrakthi engapheliyo ye-COMP / i-USDT ene-50x
Ukuhlaziywa: 29 Juni 2020
Utshintshiselwano olukhulu lwe-crypto Binance lubhengeze izicwangciso zalo zokwazisa ikhontrakthi engapheliyo kwi-Tether (USDT) kwiqonga layo.
NgoMvulo, nge-29 kaJuni, uBinance ubhengeze ukuba abasebenzisi bayo ngoku banokuvula izikhundla kwizivumelwano ezingapheliyo ze-COMP / USDT ukusukela ngoLwesibini, nge-30 kaJuni. NgokukaBinance, "Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha phakathi kwe-1-50x yokuphakamisa."
Nangona ikwayikhontrakthi yexesha elizayo, enye yomahluko ophambili phakathi kwekontrakthi engapheliyo neyesiko yeyokuba kwizivumelwano ezingapheliyo akukho mhla umiselweyo wokuphelelwa. I-COMP / i-USDT yezivumelwano ezingapheliyo zinokuvula kwaye zivale ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
UBinance ubonelele ngamanqaku amane axhasayo kuphehlelelo. Ukulandela inqaku lokuqala, "Ukucaciswa kweekhontrakthi zekhontrakthi zexesha elizayo", I-Binance Futures iya kuhlala kuphela kwizivumelwano ezingapheliyo kwi-USDT.
Iimpawu zeCompP / USDT zibandakanya:
Ubuncinci bekhontrakthi yobungakanani - 0.001
Ubungakanani bekhontrakthi ephezulu - 10,000
Ubungakanani obuphezulu- 50x
Isilinganiselo soMlinganiso wokuqala weMargin - 2%
I-Binance ihlawulisa umrhumo wokupheliswa okumiselweyo we-0.5%.
I-COMP iya isiba yindumasi njengeyona projekthi inkulu yeDeFi engaphezulu kwe- $ 600 yezigidi kwi-crypto-asethi. Kudweliswe kutshintshiselwano oludumileyo kubandakanya iCoinbase kunye neBinance. I-Binance idwelise i-COMP ngoJuni 26, ivumela abasebenzisi bayo ukuba bathengise ngababini abane kubandakanya i-COMP / USDT.
I-COMP iye yatsiba iipesenti ezingama-25 ngokuphendula kuluhlu lweBinance. I-OKEx idwelise i-COMP namhlanje nge-29 kaJuni.
Umqondiso kuLawulo lweCompound
ICompound Finance liqonga elibolekisiweyo, elisekwe e-Etherum evumela abasebenzisi ukuba bafumane inzala okanye baboleke iiasethi ze-crypto, kubandakanya i-ETH, USDC, WBTC, BAT, DAI, SAI, kunye ne-ZRX.
Nangona abenzi beprojekthi betyhola ukuba baqalise ukuyila umthetho olandelwayo ngo-2017, isicelo asizange sikhutshwe ngokusesikweni kude kube phakathi ku-2019. Eyahlukileyo kwamanye amanyathelo e-crypto, ngexesha lokumiliselwa kweCompound, khange ivelise ithokheni yemveli.
Iprojekthi yeDeFi ikhuphe ithokheni yayo nge-16 kaJuni, ebizwa ngokuba yi-COMP, echazwa njengophawu lolawulo olujolise ekuphuculeni amalungelo okuvota kwiprotocol.
tags Binance, ikhampasi, I-COMP / USDT, USDT
Igolide ukuya kwi-Hit ye-1,800 yeMpawu njenge-inflation-Hedge Assets Inzuzo yezibheno
Igolide ihlala ibotshelelwe kwinqanaba elijikeleze inqanaba le-1,770 leedola ngenxalenye engcono yeseshoni yaseYurophu kwaye nangoku sisondela esiphelweni seseshoni. Okwangoku, abenzi beqhinga kwi-TD Securities bakhethe ukuba isinyithi esimthubi sinokugqitha kwi-1,800 yamanqaku njenge-inflation-hedge asethi efumana ukuthandwa.
Ngokwabahleli beqhinga, igolide isecicini lokuphuma njengoko isenzo samva nje sexabiso siqhubeka ukomeleza umbono wabatyali mali kwindima yegolide esuka kwimpahla ekhuselekileyo iye kwindawo yexabiso lentengo. Bongeze ngelithi “yonke into” yokukhula kwexabiso lentengo isathathwa njengephantsi kweenjongo zomgaqo-nkqubo. Oku kuthetha ukuba ukwehla kwamaxabiso kufuneka kwandise ukuxhasa ngakumbi igolide ukuthatha ii-1,800 zeedola kwixesha elikufutshane.
Baphelile ngokukhankanya ukuba utshintsho lwakutshanje kwitemplate yeFederal Reserve icebisa ngamandla ukuba iiasethi zokunyuka kwamaxabiso ezinto ezifana negolide zingaqhubeka nokukhula ekuthandeni.
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela - nge-29 kaJuni
Igolide ihleli kuluhlu lokudityaniswa kwiseshoni yanamhlanje yokurhweba kuthathelwa ingqalelo ukuba akukho zibalulekileyo zibalulekileyo namhlanje. Singajonga ukuhla komkhombandlela kwisalathiso seMACD. Ikhefu elingaphezulu kwalo mgca liya kuba ngumqondiso ophilileyo wokuba igolide iphinde yabuya kwakhona kwaye siyayibona isiya kwi- $ 1,800 kwakhona.
IJamani 30 (DE30EUR) Ihla phakathi kwamanqanaba 12000 kunye ne-12600, kwinqanaba ekujoliswe kulo 14569.10
Iindawo eziKhuselekileyo: 13600, 14000, 14400
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 11200, 10800, 10400
IJamani 30 (DE30EUR) Iindlela zexesha elide: I-Bullish
IJamani i-30 ikwi-uptrend. Isalathiso senyuka saya kwinqanaba le-13000 kwaye saxhathisa. Umzimba wekhandlela uvavanye inqanaba lokubuyisa le-0.618 yeFibonacci. Oku kubonisa ukuba isibini siya kuphakama kwaye sifikelele kwinqanaba lokwandiswa kwe-1.618. Ukunyuka okuphezulu kulindelwe.
I-DE30EUR-Itshathi yemihla ngemihla
Isalathiso sikwinqanaba lama-54 leSalathiso saMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha le-14. Iimarike zikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMAs zijonge phezulu zibonisa imeko yangaphambili. Imilinganiselo ehambayo ine-crossover ye-bullish.
IJamani 30 (DE30EUR) Ixesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisecaleni. Ukusukela ngeyeSilimela, esi sibini besitshintsha-tshintsha phakathi kwamanqanaba 12000 kunye ne-12600. Ixabiso linokujika emva kovavanyo lwamaxabiso aphezulu. Nangona kunjalo, uptrend uya kuqhubeka ukuba inqanaba le-12600 laphuliwe.
I-DE30EUR-4 Itshathi yeYure
Imakethi okwangoku ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iimarike zikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Imbonakalo Jikelele yeJamani 30 (DE30EUR)
Isalathiso se-DE30EUR sisaqhubeka ukuhla phakathi kwenqanaba le-12000 kunye ne-12600. Ngokwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kuphakama kwaye ifikelele kumanqanaba okwandiswa kwe-1.618. Ngamanye amagama, i-DE30EUR iya kufikelela kwindawo ephezulu ye-14569.10
tags DE30EUR, Jamani 30, Uhlalutyo Technical